Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in todobo maleeshiyo Al-Shabaab ah lagu dilay weerar ka dhacay Jubbada Dhexe - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDowladda Soomaaliya oo sheegtay in todobo maleeshiyo Al-Shabaab ah lagu dilay weerar ka dhacay Jubbada Dhexe
August 17, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in todobo maleeshiyo Al-Shabaab ah lagu dilay weerar ka dhacay Jubbada Dhexe. [Xigashada Sawirka: Al Jazeera]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamadeeda oo kaashanaya ciidamo ajnabi ah ay dileen todobo katirsan maleeshiyada Al-Shabaab weerar ka dhacay magaalada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe shalay oo Arbaco ahayd, sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya.
“Ciidamadeenu waxay dileen todobo maleeshiyo oo katirsan Al-Shabaab, oo uu kamidyahay hoggaamiye sare oo Al-Shabaab ah kaasoo masuul ka ahaa qaraxyo badan oo ka dhacay gudaha Muqdisho,” ayaa lagu yiri bayaanka.
Bayaanka ayaa lagu sheegay in Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu amray weerarka, iyadoo dowladda iyo saaxibadeeda caalamku ay sii wadi doonaan weerarada noocaan oo kale ah ee ka dhanka ah Al-Shabaab si loo wiiqo awooda maleeshiyada.
July 22, 2017 Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya oo shaqo joojin ku sameeyay xoghayaha joogtada ah ee wasaaradda
October 29, 2017 Shirka u dhaxeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada oo ka furmay magaalada Muqdisho
Sweden oo ciidamo u soo diraysa Soomaaliya si ay uga qeyb qaataan la dagaalanka burcadbadeeda
Puntland President travels to Saudi Arabia for hajj
Madaxweynaha Soomaaliya oo u safri doona Uganda
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa maanta oo Arbaco ah la filayaa in uu safar ku aado dalka Uganda, sida ay ilo-wareedyo katirsan dowladda ay u sheegeen warsidaha Puntland Mirror. Madaxweynaha ayaa martiqaad [...]
Madaxweynaha Puntland oo isku shaandhayn uu ku sameeyay maxkamada ciidamada xilkii uga qaaday guddoomiyihii
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa isku shaandhayn uu ku sameeyay maxkamada ciidamada xilkii uga qaaday guddoomiyaha maxkamada ciidamada Puntland Kornayl Cabdifataax Xaaji Aadan, sida ilo-wareedyo ku dhow madaxtooyada ay u sheegeen warsidaha [...]